ओलीद्वारा प्रचण्डको पद खारेज, माओवादीमा खैलाबैला ! – Pahilo Update
ओलीद्वारा प्रचण्डको पद खारेज, माओवादीमा खैलाबैला !
By sandesh sidha	 On Apr 15, 2021
काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रचण्ड हटाइएका छन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णयले प्रचण्डलाई राज्य व्यवस्था समितिबाट हटाएको हो। प्रचण्ड राज्य व्यवस्थाबाट कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेका छन्। र्थ समितिमा घनश्याम भुसाल, विनोद चौधरी, मोतीलाल दुगड, वर्षमान पुन परेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटालाई पनि राखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले सेक्युरिटी प्रिटिङ प्रेसमा ७० करोडको घुस डिल गरेको आरोप लागेका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिमा गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेको हो।
यसरी निर्माण भएको समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफूनिकट सांसदहरूको बहुमत पुर्‍याएका छन्। संसदीय सुनुवाइमा असफल बनाउन सक्ने कुरालाई ख्याल गर्दै उनले त्यहाँ रहेका सदस्यहरूको हेरफेर गरेका हुन्। समितिमा १५ जना सदस्य रहेको अवस्थामा कुनै पनि सुनुवाइ प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न ६ जना भए पुग्छ। अस्वीकृत गर्न १० जना चाहिन्छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय सभाका पनि सदस्य हुन्छन्। अहिले समितिमा ओली पक्षका सुमनराज प्याकुरेल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नन्दा चपाईं सदस्य छन्।
सुनुवाइ समितिको पुनर्संचना भएको स्थितिमा पनि ओली पक्ष बाहेकले दुई तिहाइ पुर्‍याउने स्थिति रहँदैन। जसले गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट ओलीले चाहेका हरेक प्रस्ताव स्वीकृत हुनसक्छन्।
३० लाख हिनामिना आरोपमा भीम रावललाई जेल हाल्न ओलीको उर्दी !